Broadcast Beat မဂ္ဂဇင်းကို NAB မှထုတ်လုပ်သူအဖြစ်နာမည်ပေးထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 NAB ပြရန် » ထုတ်လွှင့် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏မဂ္ဂဇင်း Named ထုတ်လုပ်သူ Beat
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းဟာ 2016 မှာအဓိကရှိနေခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည် Beat NAB ပြရန် 16, 21 - ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများမှတဆင့်, roving ရုပ်ရှင်သမားတွေ, လူမှုရေးမီဒီယာလွှမ်းခြုံနှင့် "တိုက်ရိုက်-ဘလော့ဂ်" ဧပြီလ 2016 featuring ။
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) ဇန်နဝါရီ 5, 2016 - တိုက်ရိုက်ထံမှအသံလွှင့် NAB ပြရန် တနင်္ဂနွေဧပြီ 17 စတင်စတူဒီယို ONE,th ကြာသပတေးနေ့ဧပြီလ 21 မှတဆင့်st, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းဟာ SHOW နှင့်အတူ Glow လိမ့်မယ် Beat ။ 30 ကျော်သင်္ဘောသားအဖွဲ့ဝင်များက (ထိုကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာပန်းချီဦးမည်အသက်ရှင်သောထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုပြန် remoting) ရက်တွင် www.nabshow.com နှင့် www.broadcastbeat.com - Facebook က, Periscope, Twitter, YouTube နဲ့အခြားလူမှုရေးနေရာများမှတဆင့်ပြင်းထန်သော, Real-time အွန်လိုင်းလွှမ်းခြုံပေးနေချိန်မှာ ... ကျွန်တော်နေရာတိုင်းသငျသညျဖွစျခငျြဖြစ်လိမ့်မယ်။
NAB ပြရန်®ရိုက်ကူးဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အားလုံးနတ်ကတော်အနှံ့အကြောင်းအရာပေးပို့ဖုံးအုပ်ထားသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ 103,000 နိုင်ငံများနှင့် 166 + ပြသခဲ့သည်ထံမှထက်ပို 1,700 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, NAB ပြရန် ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအသစ်ပစ္စည်းများမှအကြောင်းအရာများပေးပို့လက်ခံသောဖြေရှင်းချက်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
2016 များအတွက်ဆောင်ပုဒ်: "အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား, သတ်မှတ်, တိုက်ဖျက်မည်: ချိတ်ဆက်နည်းပညာ, လတ်ဆတ်တဲ့အကြောင်းအရာ, immersive အတွေ့အကြုံများ" -, strategize ဖန်တီးအပ်ဖျော်ဖြေ, အမှတ်တံဆိပ်, connect, ပညာပေး, အမြတ်အစွန်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကမ်းလှမ်း။
"ဒီမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတိုက်ဖျက်မည်ဖြစ်လာသည်။ dynamic ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာများအကြောင်းအရာနှင့်အဖွင့်ဖွင့်အတိုငျးအဆမဲ့အခွင့်အလမ်းများကို၏နယ်နိမိတ် shattering နေကြသည်။ NAB ပြရန်®သမားရိုးကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှအခမဲ့ကိုချိုးဖျက်နှင့်သင့်စိတ်ကိုဖွင့်ဖို့သာရာအရပျ၏ "မှာပိုပြီးကြည့်ရှုပါ။ : www.nabshow.com/attend/show-overview.
စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်မှု 90 + နှစ်ပေါင်းနှင့်တကွ, Show ကိုပြန့်နှံ့ထွက်နေရာ 19.8 သန်းစတုရန်းပေကျော်, On-site ကိုယ်ယူခြင်း, Power ကျော် $ 1 ဒေါ်လာဘီလီယံကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
"မာနထောင်လွှားအပြင်အသံလွှင့် Beat ကိုသူအပေါင်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် NAB ပြရန် အဆိုပါ 2016 ပြရန်များအတွက်တိုက်ရိုက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, NAB ပြရန် CEO ဖြစ်သူရဲ့ထံမှနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်မှော်ဖန်တီးခဲ့သူကအရမ်း Tech မှ - - ယို-ထုပ်ပိုးဟာအကောင်းဆုံးခွက်တဆယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလငျးအိမျနှငျ့အတူရှိ၏ဒီတစ်ခုဖိုရမ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်များမှာအားလုံးအဘယ်သူကို၏, စက်မှုလုပ်ငန်းကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးလက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ပေး! ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုသူတို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေလျှင်အဖြစ်တက်ရောက်ရန်မနိုင်တဲ့သူတွေကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံအွန်လိုင်းလွှမ်းခြုံရောက်စေဖို့ဖြစ်ပြီး, ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူနေသောသူတို့ကို ပို. မွငျလြှငျများ၏ခံစားချက်ရှိသည်လိမ့်မယ်! အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျ? blogged-နေနှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့။ "- ရိုင်ယန် Salazar, In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အယ်ဒီတာ, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat ။
3150 ဧည့်သည်ထက် ပို. ၏တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းတည်ရှိသော 3.2 သန်းစတုရန်းပေဖွဲ့စည်းပုံမှာ - Las Vegas မှာ, နီဗားဒါးအတွက် 100,000 ပရဒိသုလမ်းမကြီးမှာတည်ရှိပြီး, အ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (LVCC) ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးခေတ်သစ်နှင့် functional အစည်းအဝေးတွင်အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်သည် အခန်းပေါင်း။ အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်ဧည့်သည်များအာဏာပိုင် (LVCVA) က operated, ဗဟိုက၎င်း၏ဘက်စုံများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များအကြားလူသိများသည်။ အဆိုပါ Las Vegas မှာဟိုတယ်နှင့်ကာစီနိုထိုအဘို့အိမ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် LVCC, ကပ်လျက် NAB ပြရန် ဖွင့်ပွဲ, နေ့လယ်စာစားပွဲနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များ။
ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့် & ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏ဒီဇိုင်း, အဆောက်အဦ & ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အများဆုံးအရေးပါသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအပေါ် peer-to-peer ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသာပေးခြင်း, မဂ္ဂဇင်းအတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများကဆောင်းပါးများနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်သူများ featuring, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်လစဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ဝေဖြစ်ပါတယ် Beat ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွင်း, ဒါပေမယ့်လည်းပညာရေး & သင်တန်း, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ခဲမျိုးဆက်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ - ပညာရှင်များမိမိတို့၏အလုပ်အကိုင်အမှာ excel နှင့်စျေးကွက်နှင့်အတူထိတွေ့ရောင်းချသူကိုစောင့်ရှောက်ကူညီဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ broadcast, မဂ္ဂဇင်း NAB နဲ့တူအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်အားလုံးထိပ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီတွေမှာဆက်သွယ်မှုရှိပြီး Beat SMPTE, NATAS, SBE အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းလူ့အပြန်အလှန်မပါဘဲသတင်းတိုက်ရိုက် (24 / 7) ကိုလွှတ်နိုင်စွမ်းပေးခြင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ backend စနစ်များကိုတိုက်ရိုက် login ကိုထောက်ပံ့ပေး Beat ။ ဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာများ၏အနာဂတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ်အခါ, အတိတ်အဘို့ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်လက်ရှိစူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းသင့်ရဲ့လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ် Beat ။
ဖုန်းနံပါတ်: (855) 44-BBEAT, Ext ။ 700
2015 NAB ပြရန် 2016 NAB ပြရန် Las Vegas မှနီဗားဒါးအတွက် 3150 ပရဒိသုလမ်း NAB ကွန်ဗင်းရှင်း Las Vegas မှ NAB NAB ရေဒီယိုပြရန် NAB ပြရန် NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB ပြရန် Conferences က Show ကို LIVE NAB! Show ကိုသတင်း NAB Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB Show ကိုစတူဒီယို ONE NAB NAB15 လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး အဆင်သင့်သတ်မှတ်မည်တိုက်ဖျက်မည်: ချိတ်ဆက်နည်းပညာလတ်ဆတ်တဲ့အကြောင်းအရာ immersive အတွေ့အကြုံများ ကြာသပတေးနေ့ဧပြီလ 17st 21 မှတဆင့်တနင်္ဂနွေဧပြီ 2016th အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်ဧည့်သည်များအာဏာပိုင် (LVCVA) အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (LVCC) အဆိုပါ Las Vegas မှာဟိုတယ်နှင့်ကာစီနို 2016-03-13
ယခင်: Show ကိုပါတီများ NAB: 2016 NAB Show ကိုပါတီစာရင်း